समाचार - के WPC सजावट चित्रित गर्न सकिन्छ?
के WPC सजावट चित्रित गर्न सकिन्छ?
WPC decking छ को लागी छोटो काठ प्लास्टिक र समग्र सजावट, यो सबै भन्दा बढी विश्वमा लोकप्रिय छ। जब हामी कम्पोजिट डेकि describeको वर्णन गर्छौं, हामी सधैं भन्छौं डब्ल्यूपीसी डेकिंग कुनै चित्रकारी, कुनै गोंद, कम मर्मतसम्भार हो। त्यसोभए कसैले डब्ल्युपीसी डेकिंग बोर्डहरू रंग्न सक्छ कि? , कसरी आउटडोर कम्पोजिट डब्ल्यूपीसी डेकिंग पेन्ट गर्ने?
अवश्य पनि हामी कम्पोजिट डेकिंगलाई रंग्न सक्दछौं, यो अन्य हार्डवुड जस्तै हुन सक्छ। कुनै समय हामी अरू केही र want्ग चाहन्छौं वा तपाईंको कम्पोजिट डेकले केही लुप्त भइरहेको देखाइरहेछ, त्यसोभए समय आयो भने आफ्नै हातमा लिने समय। तपाईंले ब्रश तयार गर्नुपर्छ, केहि पेन्ट र अन्य आवश्यक उपकरणहरू। तब हामी हाम्रो पेन्ट गर्न सुरू गर्न सक्छौं आउटडोर डब्ल्यूपीसी डेकिंग.
पहिले: बोटहरू हटाउनुहोस् वा कभर गर्नुहोस्। यदि तपाईंले तपाईंको WPC डेकिंग बोर्डहरूमा जgle्गल पाउनुभयो भने, तपाईंले क्यानभास वा प्लास्टिक ड्रप कपडाहरूसहित सम्पूर्ण फूलहरू छोप्नुपर्नेछ वा तिनीहरूलाई हटाउनुहोस्। WPC फर्श.
दोस्रो: तपाईको डेकमा सफ्ट गर्नुहोस्। केही WPC बोर्डहरू व्यक्तिगतको लागि प्रयोग गरिरहेको छ, तपाई सजिलै आफ्नो WPC कम्पोजिट डेक सफा गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं चित्र बनाउन तयारी गर्नुहुन्छ। आधारभूत मलबेज र फोहोर सफाका लागि साबुन पानी मिश्रण र कम प्रेसर पावर धुने वा सफ्ट ब्रश प्रयोग गर्नुहोस्। फफुल्ली र मोल्ड हटाउनको लागि, तपाईं दुई भाग सिरका र एक भाग पानीमा एक बाल्टिनमा मिक्स गर्न चाहानुहुन्छ। स्पष्ट रूपमा धुनुहोस् र सुकाउनुहोस्।
तेस्रो: तपाईंको कम्पोजिट डेक बालुवा गर्नुहोस् र प्राइम गर्नुहोस्। सम्भव पेंटको स्मोस्टेस्ट कोट लागू गर्न, तपाईं तपाईंको डब्ल्यूपीसी काठ डेकिंगलाई अन्नको दिशामा गएर डिकिंग बोर्डहरूलाई सहज बनाउन र बालुवा गर्न सक्नुहुन्छ। यसका दाह्रीहरू सफा गर्न निश्चित गर्नुहोस्। एक झाडू र फेरि एक पटक पानीले धुनुहोस्। एक्रिलिक ल्याटेक्स बाहिरी प्राइमर छनौट गर्नुहोस् र बाल्टिलाई तपाईंको रोलर ट्रेमा राख्नुहोस्।
चौथो: तपाईंको पेन्ट गर्नुहोस् आउटडोर डब्ल्यूपीसी डेकिंग.जब प्राइमर १००% सुख्खा हुन्छ, तपाईं पोख्न सक्नुहुन्छ
तपाईंको आउटडोर पोर्च रोलर ट्रेमा पेन्ट गर्नुहोस् र काममा आउँनुहोस्। सम्भावित दोस्रो कोट थप्नु अघि पहिलो अनुप्रयोग पूर्ण रूपमा सुक्खा बनाउन निश्चित गर्नुहोस्। सुख्खा समय फरक छ। त्यसैले तपाईंले सिफारिस गरिएको कोट अनुप्रयोग समयहरूको लागि उत्पादन लेबल जाँच गर्नु पर्छ।
थपको रूपमा, तपाइँ कुन र want्ग चाहानुहुन्छ, तपाइँ केवल पहिलो चित्रकला तयार गर्नुहुन्छ। आशा छ तपाइँ WPC उत्पादनहरूसँग अधिक प्रकृति जीवन पाउन सक्नुहुन्छ।
काठ प्लास्टिक कम्पोजिट डेकिंग, डब्ल्यूपीसी कम्पोजिट डेकिंग, आउटडोर डब्ल्यूपीसी डेकिंग, WPC सजावट भुइँ, WPC फर्श, WPC आउटडोर डेकिंग,